Yepamusoro-Yemhando KN95 yekufema fekitori uye vagadziri | Sanxin
Ichi chigadzirwa chinoitirwa kushandiswa nevashandi vekurapa panguva yechisimba
Maumbirwo uye kuumbwa:
Iyo inoumbwa nemhino clip, mask uye mask tambo. Iyo mask mashandiro ekuvhara mwedzi wemupfeki, mhino uye chirebvu kuitira kuti zvidzivirire zvakananga zvinosanganisira yemukati dura, yepakati dura uye yekunze dura, yaro yemukati neyekunze matanda akagadzirwa asina-rakarukwa machira uye yepakati rukoko inogadzirwa nekunyungudika- yakaputirwa machira; iyo maski tambo yeisina-yakarukwa machira kana elastic band; iyo yemhino clip yakagadzirwa nezvinhu zvepurasitiki. kurwisana nehutachiona hwehutachiona, hunyoro hwemuviri uye zvidimbu, nezvimwewo kuburikidza nechipingaidzo chemuviri.
Bvisa maski kubva mupakeji, uye uzvipfeke nemhino clip kumusoro zvichisanganisira chikamu chemukati, chepakati nepakati uye chekunze, icho icho chemukati nekunze zvidimbu zvakagadzirwa nemucheka usina kurukwa uye wepakati mupendero wakagadzirwa nesimbi yakanyungudutswa ; iyo maski tambo yeisina-yakarukwa machira kana elastic band; iyo yemhino clip yakagadzirwa nezvinhu zvepurasitiki.
uye nerima ruvara divi kunze. Chinja iyo yemhino clip nemaoko maviri padivi pemhino bhiriji, uye zvishoma nezvishoma pinda mukati kubva pakati kusvika mativi ese.
1. Chigadzirwa chisina kuchena chakavezwa neEO uye chinopihwa chena. Ndokumbira utarise iyo yekutanga pasuru usati washandisa. Usashandise kana iyo yekutanga package yakanganisika kana iine zvekunze zvinhu.
3. Chigadzirwa chinofanira kushandiswa nekukurumidza mushure mekuburitswa.
4. Chigadzirwa ndechekushandisa kamwechete uye chinofanira kuparadzwa mushure mekushandisa.
Chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mune isina kupisa gasi, isina mweya uye yakachena
Pashure: Central venous catheter kurongedza
Zvadaro: Cold cardioplegic solution perfusion zvishandiso zvekushandisa kamwechete
Chiedza chinodzivirira infusion set
Chiremba kumeso mask yekushandisa kamwe chete